Qaraxii ugu horey oo ka dhacay magaalada Muqdisho magacaabida Ra iisal wasare Rooble ka dib | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qaraxii ugu horey oo ka dhacay magaalada Muqdisho magacaabida Ra iisal wasare...
Qaraxii ugu horey oo ka dhacay magaalada Muqdisho magacaabida Ra iisal wasare Rooble ka dib
Waxaa goordhaw qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay inta u dhaxeysa Isgoosyada Baar Ubax iyo Black Sea gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaan Daallo , waxaana qaraxan ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sida aan wararka ku helnay qaraxan waxaa fuliyay qof waxyaabaha qarxa jirkiisa kusoo xiray kaa oo isku qarxiyay goob ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan Nabad sugida Soomaaliya gaar ahaan kuwa dhar cad ah.
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in qaraxa uu ka dhacay geed hoostiisa ay inta badan fariisan jireen ciidanka dhar cadka ah, waxaana wararka soo baxaya qaarkood sheegayaan in qaraxa fulisay haweeney halka dadka qaarna nin sheegayaan.
Gaadiidka gurmadka deg dega oo soo gaaray goobta qaraxu ka dhacay ayaa goobtaasi ka qaaday dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxa, walina lama oga khasaaraha dhabta ah ee qaraxan ka dhashay.
Previous articleSoldier rapes 4-year-old girl and sentences her to death
Next articleThe first Suicid bombing in Mogadishu after the appointment of Prime Minister Roble
Wasiirada Khadiija Diiriye oo Guri Xoog uga Heysato Sanado Jen Maxamed Abshir Hamaan Allaha u naxariister
Sheikh Abdullahi Ali Adan and other members killed in shelling in...
Akhriso Faalo Kusaabsan Shirka Dhusamareeb 3